JABUUTI Oo Ka Hadashay Saldhig La Sheegay Inay Siisay Ciidamada Badda Itoobiya - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
JABUUTI Oo Ka Hadashay Saldhig La Sheegay Inay Siisay Ciidamada Badda Itoobiya
By Deeq A., Yesterday at 04:31 PM in News - Wararka
(SLT-Jabuuti)-Dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horreysay ka hadashay warbixino ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka Itoobiya oo lagu sheegay in ciidamada badda Itoobiya ee cusub uu saldhiggooda noqon doono Jabuuti.
Wargeyska Capital Ethiopia oo soo xiganaya Ilo-wareedyo ayaa qoray in intii lagu guda jiray booqashadii uu Jabuuti ku tagay toddbaadkii saddexaad ee bishii October, uu ra’iisul wasaare Abiy Ahmed kala hadlay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle in Jabuuti ay saldhig siiso ciidamada badda Itoobiya, la iskuna raacay.
Hase yeeshee safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idiris Faarax oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in weli aysan jirin wax heshiis ah oo Jabuuti ku ogolaatay in ay saldhig siiso ciidamada badda Itoobiya.
“Warkaas waa war jaraa’iddada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegaya in ciidanka badda ee Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan Jabuuti, warkaasi ma ahan war rasmi ah, ma heyno wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla gaareen ” ayuu yidhi.
Si katsaba Maxamed Idiris Faarax waxa uu qiray in labada waddan ay ka wada hadleen arrintan, balse illaa iyo hadda aysan jirin wax dhaafsiisan wada-hadal oo kasoo cusboonaaday arrintaas iyo heshiis rasmi ah oo la gaaray.
“Waxay ahayd dalab ka yimid ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo doonayay in ciidankaas la dejiyo dalka Jabuut, waxaa soo socdana wakhtiga ayaa inoo sheegi doonaa”, ayuu hadalka ku daray safiirka.
Safiirka ayaaa dhinaca kale sheegay in heshiis kasta oo Jabuuti ay arrintan ka gaarto uu noqon doono mid saddex geesood ah oo Faransiiska uu qeyb ka yahay. “Haddii ay noqota in heshiis la gaaro wuxuu noqonayaa heshiis saddex geesood ah oo dhexmara Faransiiska, Jabuuti iyo Itoobiya” ayuu yiri.
France ayaa dowladda Itoobiya ka caawineysa dib u dhiska ciidamada badda, waxaana iminka qaar ka mid ah shaqaalaha lagu tababarayaa dalka France, oo ah mid ka mid ah dalalka taageerada ugu weyn siinaya is-beddelada ka socda Itoobiya.
Sidoo kale, Faransiiska oo horey u gumeystay Jabuuti ayaa ah xulufada ugu weyn ee dalkaas, waxaana in uu qeyb ka noqdo heshiis kasta loo arkaa tallaabo ay Jabuuti isku ilaalineyso, si aysan dhibaato uga iman Itoobiya oo aad uga weyn ugana awood badan.
Kadib markii Eritrea ay ka go’day oo ay noqotay dal madax-banaan sanadii 1993-kii, Itoobiya waxay noqotay dal aan bad lahayn, waxaana la baabi’iyey ciidamadii badda ee dalkaas.
Markii uu ra’iisul wasaare noqday bishii April ee 2018, Abiy Ahmed waxa uu ku dhowaaqay in Itoobiya ay dib u dhiseyso ciidamadeeda badda.